Health Sarokar | के सबै थरीका ट्याब्लेटहरु टुक्राएर खान मिल्छ त ?
के सबै थरीका ट्याब्लेटहरु टुक्राएर खान मिल्छ त ?
संसारमा सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरिने औषधिको कुन प्रकारको हुन्छ भन्दा उत्तर आउँछ ट्याब्लेट यानिकी चक्की। यहाँहरू मध्य पनि ट्याब्लेट सेवन नगरेको सायदै कोही हुनुहुन्छ होला। ट्याब्लेट कुनै साना, कुनै ठुला, कुनै सेता, कुनै रङ्गिन, कुनै गोल आकारका त कुनै लाम्चा सबै थरी हुन्छन्। आकारमा धेरै थरीका हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर ट्याब्लेट आकारमा मात्र होइन यसमा अरू भिन्नता पनि थुप्रै हुन्छन्। सोही अनुरूप यसको प्रयोग गर्ने तरिका पनि फरक हुन्छ र टुक्राएर खान मिल्ने नमिल्ने पनि त्यसले छुट्याउँछ।
‍जनमानसमा ट्याब्लेट भन्ने बित्तिकै खाने औषधि भनेर बुझ्ने चलन छ । धेरै जसो ट्याब्लेट खाने भए पनि ट्याब्लेट खाने तरिकामा पनि भिन्नता हुन सक्छ। धेरै जसो ट्याब्लेट पानी सँगै निलिन्छ भने ग्यासट्राईटिस ('ग्यास्ट्रिक' - सामान्य नागरिकले प्रयोग गर्ने अपभ्रंश नाम) हुँदा खाने Digene चक्की चपाएर खानु पर्दछ। त्यस्तै गरी मुटु रोग एनजाइनामा प्रयोग गरिने Nitroglycerin चक्की जिब्रो मुनि राख्ने किसिमको हो। झन् महिलाहरूको योनिमा देखिने एक प्रकारको फंगल सङ्क्रमणमा प्रयोग गरिने Clotrimazole भजाईनल ट्याब्लेटको प्रयोग भनेको योनिमा राखेर गर्ने हो।
नेपाली बजारमा पनि अनेकौँ खालका ट्याब्लेट बजारमा पाइनछ र त्यसैले आफूलाई दिइएको औषधिको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा औषधि किन्दा नै फार्मासिष्टसँग जानकारी लिने बानी बसाल्नु पर्दछ। अब हामी आजको विषय ट्याब्लेट यानिकी चक्की औषधि टुक्राएर खान मिल्छ वा मिल्दैन तिर लागौँ । म औषधिको बारेमा पढेको, औषधि उद्योगमा काम गरेको र औषधिको बारेमा पढाउने मानिस भएकाले त्यसको बारेमा सत्य तथ्य कुरा सबै माझ पुर्‍याउनु पर्छ भनेर यो लेख लेख्दै छु।
ट्याब्लेट आखिर किन टुक्राइन्छ त ?
झोल औषधि प्रयोग गर्दा डाक्टरले बिरामीको आवश्यकता अनुसार परिमाण थप घट गरेर बिरामीका लागि औषधि दिन सजिलो हुन्छ। बिरामीलाई पनि झोल औषधि चाहिने मात्रा मापन गर्न खासै कठिनाइ हुँदैन। तर ट्याब्लेट बिरामीलाई दिँदा भने बिरामीको आवश्यकता अनुसार औषधिको परिमाण थप घट गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसैले नै कति औषधिहरू आवश्यकता अनुसार विभिन्न परिमाणमा बनाइन्छ। दमका रोगीमा प्रयोग गरिने Salbutamol २,४,८ एमजीको आउने गर्दछ। तर सबै औषधि फरक फरक परिमाणमा बनाईदैन, त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई चाहिने परिमाण अनुसार ट्याब्लेटलाई टुक्राएर खाने गरिन्छ। कति मानिस फेरी ट्याब्लेट अलि ठुलो भयो भनेर टुक्राएर खाने गर्दछन्। के सबै किसिमका ट्याब्लेटलाई टुक्राएर खान मिल्छ त?
सामान्यतया ट्याब्लेट भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसमा Paracetamol ट्याब्लेट दिमागमा आउँछ। स्मरण गरौँ त त्यो ट्याब्लेट कस्तो हुन्छ। सेतो गोलो आकारको त्यो चक्की बिचमा चिरिएको हुन्छ। उक्त चिरालाई फार्मास्युटिकल विज्ञानको भाषामा भन्दा स्कोरिंग "scoring" भनिन्छ। त्यो स्कोरिंगको महत्त्व भनेको आफूलाई चाहिँदा औषधिलाई दुई टुक्रा पार्न सकियोस भन्ने नै हो। सामान्यतया स्कोरिंग गरिएका ट्याब्लेट दुई टुक्रा पारी खान मिल्दछ। तर दुई भन्दा बढी टुक्रा पारेर कुनै पनि औषधिको सेवन नगर्नु नै राम्रो हो । यदि धेरै टुक्रा परिन्छ भने सो औषधिको मात्रा गडबड हुन जान्छ।
कस्ता ट्याब्लेटहरू टुक्राएर खान मिल्दैन (कारण) ?
१. झट्ट हेर्दा नै असममित देखिने ट्याब्लेट - RESERT (ठिक आधा हुँदैन)
२. इन्टेरिक् कोटेड ट्याब्लेट - PANTOPRAZOLE (काम नलाग्ने हुन्छ)
३. सुगर कोटेड ट्याब्लेट - IBUPROFEN (खान नसक्ने स्वाद हुन्छ)
४. धेरै समय सम्म काम गर्ने "सस्टेण्ड रिलिज ट्याब्लेट" - VOVERAN-SR (धेरै समय सम्म काम गर्न छोड्छ)
५. औषधिको परिमाण एकदमै कम हुँदा पनि टुक्रा पारेर खाँदा समस्या हुन सक्दछ - DIGOXIN-१२५ microgram (यस्ता औषधि उच्च जोखिम युक्त औषधिमा पर्ने हुनाले पनि त्यसरी प्रयोग गर्नु हुँदैन)
‍ "उच्च जोखिमयुक्त औषधि : चिनौं, बचौं, बचाऔँ" फार्मासिष्ट र फार्माकोलोजिस्ट उप प्राध्यापक संजय मणि दीक्षितको अर्को लेख ।
नेपालको मिडियामा ट्याब्लेट टुक्राएर खानै हुन्न भन्ने जस्तो समाचार पनि आएको छ। नेपाल जस्तो देश जहाँ धेरै ठाउँमा अझै औषधिको आभाब देखिन्छ, यस्तो देशमा आफूसँग भएको औषधि टुक्राएर खानै हुन्न भन्ने सन्देश जानु ठिक होइन भन्ने मेरो विचार हो। हो मिले सम्म सही परिमाणको औषधि (ट्याब्लेट) सेवन गर्नु राम्रो हो तर त्यस्तो औषधि नपाएमा टुक्र्याउन मिल्ने ट्याब्लेट टुक्राएर खान अवश्य मिल्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। साथै अब उप्रान्त तपाईँ पनि आफूले सेवन गर्ने औषधी टुक्राउन मिल्छ वा मिल्दैन भनी औषधि किन्दा नै सोधेर, टुक्राउन मिल्ने औषधि मात्र भाँचेर खाने बानी बसाल्नु होला।
लेख: संजय मणि दीक्षित
उप प्राध्यापक फार्माकोलोजी